Vaovao momba ny soavaly | Soavaly Noti
Mampientam-po ny tontolon'ny soavaly ary amin'izany dia mazava amintsika fa misy maro vaovao momba izany. Amin'ity habaka ity dia ahitanao ireo karazana vaovao voangona am-pitsikerana mba hankafizana sy havaozina amin'ny vaovao izay misy ifandraisany amin'ireo biby ireo.
Vaovao, torohevitra ary koa anecdotes mifandraika amin'ny soavaly. Ary rehefa miresaka vaovao isika dia midika fa maro ny sokajy miresaka momba izany amin'ny tontolon'ny soavaly, fanatanjahan-tena, Lalao Olaimpika, fitsaboana, valiny ary lava sns. Izany dia hahafaly ireo mpankafy an'ity tontolo ity, na dia somary lafo aza hamela antsika hanana fahatsapana tsara foana izany.
Tsy azontsika hadinoina fa misy ny safidin'ny maneho hevitra isaky ny vaovao soavaly ary amin'ity sehatra manokana ity dia tsara ny mahay manome ny hevitsika.
Mieritreritra ny hahazo soavaly ve ianao? Alohan'ny hanaovana na inona na inona dia zava-dehibe ny hahalalanao ny vidiny hitandrina azy io amin'ny toerana tsara, ...
Ny soavaly, toy ny biby rehetra ary indrindra ny biby mampinono, dia mila miala sasatra. Fa raha ny voalohany ...
Izy io dia ny Hyracotherium, soavaly an'ny karazana biby mampinono perissodactyl, izay mitovy aminy ...
Lucy Rees dia avy any Wales ary noheverina ho ambony eo amin'ny tontolon'ny soavaly. Ity vehivavy izay ...
Ny lamaody amin'ny fotoanan'ny krizy dia lasa lamaody tokoa, satria tsy mora ny mividy haingo lafo vidy ...
Breyer dia orinasa amerikana, teraka manokana any Chicago, natokana ho an'ny fanamboarana sarin-tsoavaly azo angonina. Ireto…
Ny soavaly paso tsara dia tsy mora mitaingina, ny mifanohitra amin'izay dia mila fitandremana manokana izy ireo ...
Ny tontolon'ny hazakaza-tsoavaly dia ahiahiana hatrany, amin'ny tranga maro dia misy resaka mafia na fitaomana ...
Ny filan'ny soavaly dia zavatra manerantany tanteraka, ary maro ny olona mino fa ny mifanohitra amin'izany dia zavatra manapotika ...
Tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo fanalahidy lehibe indrindra hahatongavana ho mpitaingina tsara dia misy ifandraisany amin'ny ...
Ny toetran'ny soavaly
Tokony hieritreritra foana isika fa biby soavaly tena mahaliana ny soavaly, fa amin'ny tranga rehetra dia manana toetra izay ...